IRIS, P-40 Warhawk DOWNLOAD - အဆိုပါစမ်းသပ်မှု FSX & P3D - Rikoooo
IRIS, P-40 Warhawk - အဆိုပါစမ်းသပ်မှု FSX & P3D
အရွယ် 72.2 ကို MB
downloads ရယူရန္ 8 392
IRIS လေယာဉ် Simulator SOFTWARE
များအတွက် "အေ့စ်ဓနသဟာယ၏" အထုပ်၏အောင်မြင်သောလွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက် FSX အဆိုပါ Curtiss, P-40E Kittyhawk featuring, Iris ကသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် P-40 Warhawk, P-40T နှင့်, P-40X နှစ်ခုအသစ်သောအပွောငျးအလဲ featuring အသစ်တစ်ခုထုတ်ကုန်များကိုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
P-40T တစ်အမွှာထိုင်ခုံ, P-40 airframe ၏အမွှာအင်ဂျင်မူကွဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်စစ်အတွင်းစဉ်အတွင်း P-40C တစ်အမွှာအင်ဂျင်အယူအဆနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုပြုလေ၏နေတုန်းကဆငျးရဲတည်ငြိမ်ရေးကိစ္စများကိုနှင့်အတူအနှောငျ့နှင့်ထုတ်လုပ်မှုသို့သွားလေ၏ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
P-40X Clip အတောင်ပံနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောထိုင်ခုံ P-40E နှင့်တစ်ဦး Merlin အင်ဂျင် system ပေါ်တွင်တစ်ဦး Contra-လှည့်ပန်ကာဖြစ်ပါတယ်။
ပြေးနိုင်စွမ်းအားလုံးဂရပ်ဖစ်ကတ်များကိုဖြတ်ပြီးစူပါချွန်ထက် bumpmaps နှင့်အံ့သြဖွယ်ပုံရိပ်ယောင်များပေးအပေါငျးတို့သ paintschemes များအတွက် 2048x2048 pixels ကိုမှတခုမှာ 1024x1024 pixel bitmap သခင် FSX!
များအတွက်အထူးစိတ်ကြိုက်ပွတ်ဆွဲ 360 ဒီဂရီအသံနှင့် IRIS AudioworX ထံမှတစ်ဦးကထိပ်တန်း soundset FSX.
ထိပ်တန်းရာသီဥတုဒါဏ်နဲ့အမြင်အာရုံကြည်လင်ပြတ်သားမှုအတွက်ခွင့်ပြုမရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးအနုပညာနည်းစနစ်၏အသုံးချနေထိပျတနျး paintschemes ၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုး။
အားလုံးဘုန်းပွင့် 2048x2048 pixel အရည်အသွေး repaints ၏အသုံးပြုသူများအပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ခွင့်ပြုအားလုံးပဲရာသီဥတုအလွှာ featuring တစ်ဦးကအရည်အသွေးမြင့်မား paintkit!
သငျသညျကိရိယာပျက်ပြား, စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသည့် IRIS P-40 Warhawk စနစ်များနှင့်လေယာဉ်လုပ်ကိုင်ရန်သိရန်လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုနှင့်အတူတစ်ဦးအနက်အတွက်လေယာဉ်မှူးလက်စွဲစာအုပ်။
Author: IRIS လေယာဉ် Simulator SOFTWARE
Curtiss Hawk ရဟတ်ယာဉ် III ကို 68 & BF2C-1 FSX
အခွင့်အလမ်း Vought F4U-6 နှင့်7Corsair FSX & P3D
ဒေါက်ဂလပ် A-20 ဖျက်ဆီးတယ် FS2004 1.0